Safarka Xalaal ee Australiyaanka ah - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Islaamka Australia waa diin diin laga tirada badan yahay. Sida laga soo xigtay Tirakoobkii Australiya ee 2016, tirada guud ee dadka iskood isu aqoonsaday inay yihiin Muslim Australiya, kana kooban nooc kasta oo Islaam ah, waxay ahaayeen 604,200 oo qof, ama u dhiganta 2.6% guud ahaan tirada dadka Australiyaanka ah, waana koror ka badan 15% dadkeedii hore. saami dhan 2.2% ayaa laga soo sheegey tirakoobkii hore 5 sano kahor. Tiradaas horey u ahayd 2.2%, "qaar waxay qiyaasayaan in ka badan kala bar dad aan ku dhaqmin" dhaqanka muslimiinta ee ka soo jeeda dhamaan madaahibta iyo madaahijyada islaamka ee ka jira Australia.
Tiradaas guud ee muslimiinta ah waxay ka dhigaysaa Islaamka, dhammaan madaahibta iyo firqooyinka, kooxda labaad ee ugu badan koox diimeed ee Australia, marka laga reebo dhammaan diimaha Masiixiga (52.2%, sidoo kale ay ku jiraan ku-dhaqanka iyo dhaqanka aan ahayn Masiixiyiinta).
Demographers waxay u nisbeeyaan isbeddelada kobaca bulshada muslimiinta muddadii ugu dambeysay ee tirakoobka heerarka dhalashada oo aad u sarreeyay, iyo qaababkii ugu dambeeyay ee soogalootiga. Diinta Islaamka waxay matalaan inta badan dadka ku nool Jasiiradaha Cocos (Keeling), oo ah dhul ka baxsan Australia.
Inta badan muslimiinta Australiya waxay ka tirsan yihiin labada mad-hab ee waaweyn ee Islaamka, Sunniyiinta iyo Shiicada, iyada oo kuwa raacsan mid kasta oo ka mid ah ay sii kala jabeen Madh'hab kala duwan (iskuulada fikirka ee sharciga Islaamka ee fasiraadda iyo ku dhaqanka Islaamka sharciga). Waxa kale oo jira ku takhasusay madaahibta kale ee Islaamka, oo ay ku jiraan Ahmadiyya Muslim Australiyaan ah oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyado kala duwan, Australiyaanka Ibadi ee Australiyaanka ah ee ka soo jeeda Cumaan, iyo sidoo kale qaar ka mid ah muslimiinta aan diinta lahayn, iyo ku dhowaad 20,000 Australiyaanka Druze ah oo diintoodu u muuqatay mid ka baxsan diinta Islaamka yimid Australiya oo ay la socdeen soogalootiga Druze inta badan waxay ka yimaadeen Lubnaan iyo Suuriya Waxaa sidoo kale jira suufiyada (suugaanta islaamka) laga tirada badan yahay oo ka mid ah xirfadleyda muslimiinta ee Australia.
In kasta oo bulshada Australiyaanka ah ee muslimiinta ah guud ahaan lagu qeexo aqoonsi diineed guud oo leh "Islaam", muslimiinta Australiya maahan bulsho kaligood is haysta. Bulshada muslimiinta Australiyaanka ah waxay u qaybsantahay oo kaliya kala qaybsanaanta dhaqameed ee waxa koox kasta u qeexayso inay tahay Islaamka, laakiin sidoo kale waa mid aad iyo aad u kala duwan xagga jinsiyada, qowmiyadda, dhaqanka iyo luqadda. Kooxo kala duwan oo muslimiin ah oo ka tirsan bulshada muslimiinta Australiyaanka ah ayaa sidaas oo kale la barbartaagan aqoonsiyada qowmiyadeed ee aan diinta ahayn ee la midka ah kuwa aan muslimka ahayn ee la xiriira, ama Australia gudaheeda ama dibedda.
Marka loo eego tirakoobkii la sameeyay sanadkii 2016, dadka muslimiinta ah waxay gaarayaan 604,235 oo shaqsi, kuwaas oo 42% kamid ah ay ku nool yihiin Greater Sydney, 31% ka Weyn Melbourne, iyo 8% ka Weyn Perth. Gobollada iyo taritoriyada ugu saamiga badan ee Muslimiinta waa New South Wales (3.58%) iyo Victoria (3.32%), halka kuwa ugu hooseeya ay yihiin Queensland (0.95%) iyo Tasmania (0.49%).
4.2% dadka ku nool Greater Melbourne waa muslin. Dad badan oo muslimiin ah oo halkaas ku nool waa Bosnia iyo Turki. MelbourneMuslimiinta Australiyaanka ah waxay ugu horeyn ku nool yihiin xaafadaha waqooyiga ee ku hareeraysan Broadmeadows, (inta badan Turkiga), Coburg, Brunswick iyo Epping (badanaa Lubnaan) iyo in yar oo ka mid ah hareeraha koonfureed sida Noble Park iyo Dandenong (inta badan Bosnian).
Dad aad u tiro yar oo muslimiin ah ayaa ku nool dhulka miyiga ah marka laga reebo bulshada tirada badan ee Turkiga iyo Albaniyaanka ah ee ku nool Shepparton, oo leh masaajidka ugu faca weyn Victoria, iyo Maleys ku nool Katanning, Western Australia. Jaaliyad Ciraaqiyiin ah ayaa degay Cobram oo ku taal wabiga Murray ee Victoria. Waxaa jiray bulsho muslim ah oo Albaaniyaan ah oo ka dhisan Mareeba, Waqooyiga fog ee Queensland laga soo bilaabo 1920-yadii, halkaas oo ay ka aasaaseen masjidka labaad ee ugu da'da weyn Queensland.
Perth sidoo kale waxay leedahay bulsho muslimiin ah oo diiradda saaraya agagaarka Thornlie iyo nawaaxigeeda, halkaas oo uu ku yaallo masaajid. PerthDugsiga Islaamiga ee Australiya waxaa dhigta ku dhowaad 2,000 oo arday oo ku kala yaal saddex xarumood.
Mirrabooka iyo Beechboro waxay ka kooban yihiin bulshooyinka ugu badan ee Bosnia. Masaajidka ugu da'da weyn Perth waa Perth Masaajidka William Street ee Northbridge. Waxay soo martay dayactir badan inkasta oo qaybtii asalka ahayd ay wali taallo. Masaajidada kale ee kuyaala Perth waxay ku yaalliin Rivervale, Mirrabooka, Beechboro iyo Hepburn.
Waxaa sidoo kale jira bulshooyin muslimiin ah oo ka soo jeeda Turkey, Qaaradaha Hindiya (Pakistan, Hindiya iyo Bangladesh) iyo Koonfur-bari Aasiya, gudaha Sydney iyo Melbourne, bulshooyinka Turkiga ee ku hareeraysan Auburn, New South Wales iyo Meadow Heights iyo Roxburgh Park iyo jaaliyadaha Koonfurta Aasiya ee ku xeeran Parramatta. Muslimiinta Indooniisiya, ayaa si aad ah ugu baahsan Darwin.
Hagaha Socdaalka Xaraash ee Xeebta Sunshine
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Australia